Safiirka Iran oo Muqdisho ku dharbaaxay WASIIR ka tirsan Dowlalada Federaalka!!. | Voice Of Somalia
Dowladda Soomaaliya ayaa cabasho rasmi ah u gudbisay wasaaradda arrimaha dibedda Iran, kadib markii safiirka Iran ee Muqdisho uu xafiiskiisa ku bah dilay wasiir ku xigeenka arrimaha dibedda Soomaaliya Axmed Cali Kadiye.
Javad Dehghan Lotfabadi oo Kadiye u yeeray ayaa la sheegay inuu wax ka weydiiyey arrimahaas, balse markii jawaab wanaagsan uu ka waayey ay is hadal dhaafeen, taasi oo aad uga carreysiisay dhalisayna gacan ka hadalka. Kadiye ayaa la sheegay inuusan wax jawaab ah bixin waqtigaas.
Haday isoo Gaadho LIYUU BOOLIS ayaa Hilib Dad Cunay waan Rumaysanayaa!.